Helitaanka Spam ee Gudbinta Gudbinta leh Khabiir Kala Duwan
Dhammaan noocyada gudbinta spam, khadka iyo caarada waxay xiiseynayaan isticmaalka goobta adeegaaga iyo website-yada WordPress sababo shakhsi ahaaneed. Waxay u egtahay in khawariistayaashu had iyo jeer ay mashquul yihiin kuxiriirka websaydhka iyo search engine s hal dhinac ama mid kale. Spam waxay u baahan tahay bogag badan, laakiin waxaa laga yaabaa inaanad xiiseyneynin inaad u fasaxdo ganacsigaaga. Haddii aad leedahay bogga WordPress, waa inaad ka takhalustaa spam, caarada iyo dhererka sida ugu dhakhsaha badan.
Andrew Dyhan, oo ah Cilmi khabiir, ayaa tilmaamaya in spam gudbinta uu yahay nooca spam ee saameeya barta iyo bogagga internetka ee tiro badan - bonus rating free slots. Sidoo kale, waxay ku gashaa xisaabta Google Analytics iyo raadadkaaga ku yaala raadiyahaaga search engine. Sidaa darteed, joojinta spam gudbinta waa qasab haddii aad rabto inaad ganacsigaaga ku korodho internetka
Horudhaca Spam Referrer
Spam diritaan ayaa bartilmaameed u ah labadaba bogaggaaga iyo xisaabta Google Analytics. Muddo dhowr bilood ah, waxay noqotay dhibaato weyn oo loogu talagalay websaydhka. Iyadoo adoo adeegsanaya URL-yada been-abuurka ah, khadka-shakhsiyaadka waxay diraan goobahaaga tareenada yar-yar, iyo fursadahaaga inaad ka mamnuucdo mashiinnada raadinta..
Xayeysiinta Gudbinta Spam ee Shabakadaha WordPress
Waa in aad xayeysiiso spam gudbinta ma aha kaliya koontada Google Analytics laakiin sidoo kale bogaggaaga WordPress. Tallaabooyinka soo socda ayaa lagama maarmaan u ah arrintan:
Ku rakibidda Plugins Referral Referral
Waxaad bilaabi kartaa geedi socodka adiga oo ku rakibaya labo bog oo ku-soo-gudbin ah spam on bogaggaaga WordPress. Dhawr fara badan ayaa ku jira internetka. Haddii aanad helin faylka noocaas ah ee WordPress laftiisa; waxaad ka soo dejisan kartaa ilo lagu kalsoonaan karo oo waxaad ku xiran kartaa boggaaga. Sucuri, Spamreferralblock, spp spam references, iyo plugins kale ayaa lagu tijaabin karaa arrintan. Dhammaantood waxay la socdaan isbaarada gudbinta iyo ka saari bogaggaaga gudaheeda daqiiqadaha.
Marka aad ku rakibtay plugin, talaabada xigta waa in la isku hagaajiyo goobaha boggaaga WordPress. Waa inaadan ilaawin inaad kiciso fiilada ka hor inta aan la xirin daaqada. Hadafku waa in la hubiyo in dhammaan isbaarada iyo khadadka gudbinta la soo saaro oo la xiro maalin kasta, markaa waa inaad isha ku haysaa goobaha oo aad u rakibto markii loo baahdo.
Hubi Your Updates ugu iyo abuuro Blocks Custom
Saddexaad iyo mid ka mid ah xeeladaha ugu awoodda badan waa in la eego cusboonaysiinta ugu dambeeyay ee ku yaal boggaaga WordPress iyo abuurida qowmiyado qaas ah haddii loo baahdo. Tani waxay ka hortageysaa imaatinka spam, caarada, iyo dhererka, iyo hubinta ammaankaaga goobta aad u badan. Waa inaad had iyo jeer isha ku haysaa talooyinka cusub iyo xirfadaha ay bixiso WordPress. Hubi haddii qaar ka mid ah daboolayaasha cusub la soo saaray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Waa inaad isku daydaa koodhadhka kaliya marka la hubiyo in dad badani hore u tijaabiyeen.
Eeg liiska shabakadaha la xakameynayo
Marka tallaabooyinka kor lagu soo dhameeyo, talaabada ugu dambeysa waa in la arko liiska meelaha la xakameeyey iyo subdomains si loo helo fikir fikrado ah goobaha laga heley aragti badan oo been abuur ah. Si aad u aragto liiska dhammaystiran, waa inaad tagtaa koontada Google Analytics oo aad hubiso faahfaahinta halkaas.